Ny malaza tamin’ny tontolon’ny bilaogy Kiswahili herinandron’ny novambra 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2019 3:35 GMT
Tahaka ny hoe noresahan'ireo bilaogera Tanzaniana nandritra ny fotoana naharitra ny fifidianana filoham-pirenena mampiady hevitra ao Zanzibar. Miresaka ireo tatitra nataon'ireo mpanaramaso ny fifidianana momba ny fifidianana ny 20 Oktobra i Kasri la Mwanazuo, Tanzaniana mpampianatra Kiswahili sady mpanao gazety monina any Texas. Nanambara ny Vaomieran'ny Fifidianana Zanzibar fa ny filoha ankehitriny, Amani Karume, no mpandresy. Nitatitra ireo mparanamaso Amerikana fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana ary niantso ny hanaovana fanadihadiana mahaleotena mikasika ny herisetra taorian'ny fifidiannana tamin'ny 30 Oktobra ny ambasady amerikana. Notsipahan'ny ny governemantan'i Zanzibar ny fitakian'i Etazonia.
Nisy ireo fanambarana nifanohitra nataon'ireo mpanaramaso ny fifidianana. Raha nanamarika tranga momba ny hoso-pfidianana ny governemanta amerikana, dia nahita kosa i Kasri la Mwanazuo fa nanambara ireo mpanaramaso avy ao amin'ny Komitim-pifidianana ao Tanzania (TEMCO amin'ny teny anglisy), ny Ivotoerana Fampandrosoana an'i Afrika Atsimo (SADCC) sy ny Fiombonam-be Afrikana (AU) fa malalaka sy ara-drariny ny fifidianana. Namoaka ity fanambarana ity ireo mpanara-maso ao amin'ny SADCC.
Tsy takatr'i Zainathy, vehivavy mpanao gazety avy ao amin'ny “renivohitr'i” Tanzania, Dodoma, hoe nahoana ireo mpanaramaso Amerikana ihany no nahita maso ny hoso-pifidianana. Na izany aza, tsy izany no tena mampanahy azy. Tsy niraharaha izy raha toa ka nanambara fotsiny ny tsy rariny tamin'ny fifidianana ireo mpanaramaso Amerikana. Saingy lasa lavitra mihitsy izy ireo nanolo-kevitra ny hanaovana fifidianana vaovao: “Iza moa izy ireo ?” Hoy i Zainathy nanontany.
Vao haingana, notafihan'ireo mpikambana ao amin'ny Civic United Front (CUF) ny mpanao gazety. Tadidin'i Miruko, mpanao gazety ao amin'ny Mwananchi Publications fa notafihan'ireo mpanohana ny CUF izy tamin'ny taona 2000. Tezitra tamin'ireo mpanao gazety ireo mpomba ny CUF noho izay heverin'izy ireo fa fifandraisana akaiky amin'ny antokon'ny fitondrana, Chama Cha Mapinduzi (CCM). Nanjary lsibatry ny fanafihana ireo mpanao gazety ao Tanzania, hoy i Miruko nanoratra. Roa volana lasa izay, nodarohan'ireo mpiambina fonja ireo mpanao gazety.
Mawazo na Mawaidha, bilaogera Kenyana tokana amin'ny Kiswahili, nampiditra bilaogy radio tao amin'ny tranonkalany izay ahitana hira Afrikana fahiny malaza sasantsasany avy amin'ireo mpanakanto sy tarika tahaka an'i Papa Wemba sy Mbilia Bel..
Pambazuko, mpianatra Tanzaniana maka PhD any Afrika Atsimo, namoaka lahatsoratra Kiswahili momba ny herisetra ara-politika ao Tanzania.
Funguajicho, mpianatra Tanzaniana any Oganda, faly mahita filoha mitondra manokana ny fiarany ofisialy.
Indraindray ireo bilaogera Kiswahili mizara tononkalo. Manana fomban-drazana hatry ny ela amin'ny famokarana tononkalo ny Kiswahili hatramin'ny taonjato faha-17. Sambany nizara ny tononkalony tao amin'ny bilaoginy i Harakati. Kasri la Mwanazuo manoratra momba ny toe-draharaha politika ao Zanzibar. mihaika an'i Jikomboe izy mba hanoratra valiny, izay fanao mahazatra eo amin'ny poezia Kiswahili.
Michuzi, mpanao gazety mpaka sary malaza any Tanzania, mampiseho antsika tazana an-habakabaka ny tanànan'i Arusha, Avaratr'i Tanzania ary mandefa ny sarin’ ny reirano Rufiji.